Ungayitshisa njani imovie ngeDVD Shwabanisa | Iindaba zeGajethi
Ungayitshisa njani imovie ngeDVD shwabanisa
Hoy masibone ukuba ungayirekhoda njani imovie ehlala ngaphezulu kwe-4,7 GB. Ukuba sine-movie kwi-DVD engqimba kabini esele saziyo Inokuqulatha ukuya kuthi ga kwi-8,5 GB, ke ngoko ukuba sifuna ukuyitshisa kwi-DVD yesiqhelo (oko kukuthi, umaleko omnye) kufuneka sisahlule kubini okanye siyicinezele.
Engeli xesha siza kubona ukuba imovie icinezelwe njani ukuze ilingane kwi-4,7 GB DVD eqhelekileyo. Kuba
Ukuze sikwazi ukucinezela ifilimu, siya kusebenzisa isoftware yasimahla nesebenzayo ebizwa ngokuba yi-DVD shrink eya kuthi ngokuzenzekelayo icinezele ifilimu ibe ngaphantsi kwe-4,7 GB.
1) Ukuba awunayo le nkqubo, unokuzikhuphelela uguqulelo lwamva nje lweDVD shrink from apha. Inguqulelo yamva nje ngesiNgesi kodwa uya kubona ukuba kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
2) Nje ukuba uyikhuphele kufuneka uyifake. Xa ugqiba ukufakela iwindow iya kubonakala ngathi
3) Njengoko ubona kulo mfanekiso ulandelayo, xa uvula inkqubo, ukhetho olungagqibekanga ngu "Full Disc"
Oku kusixelela ukuba siza kukopa yonke idatha bhanyabhanya yethu ngaphandle kokucima nayiphi na ifayile ukuze sifumane ikopi efanayo
imixholo kunaleyo yoqobo.
4) Ngoku kufuneka ubeke iDVD kwifilimu kwiyunithi yokufunda i-DVD, emva koko kufuneka siyifumane kwinkqubo.
Ukukhangela imuvi, siza kucofa kwiqhosha elithi «Vula iDiski».
5) Iwindow entsha iya kuvula apho iyunithi yokufunda oyifakileyo ivela khona. Cofa utolo
elisekunene kwakho kwaye uluhlu luya kuboniswa nazo zonke iiyunithi zokufunda kwikhompyuter yakho.
6) Khetha iyunithi apho ifilimu ikhoyo kwaye ucofe ku «Kulungile». Ukuncipha kweDVD kuya kuqala ukuhlalutya idiski kunye nefayile ye-
7) Uhlalutyo luhlala luthatha ngaphantsi komzuzu, nangona oku kuya kuxhomekeka kumandla ekhompyuter yakho. Xa ifayile ye-
Uhlalutyo lugqityiwe, isikrini esilandelayo siza kuvela apho ungabona khona ukuba iDVD shrink icwangcisa ukhetho lokucinezelwa "oluzenzekelayo" ngokungagqibekanga.
Ngaphantsi kolu khetho uza kubona ipesenti ebonisa inani lolwazi oluhlala luthelekiswa neyoqobo. Kule meko i-70,8% ibonisa ukuba
ividiyo icinezelwe i-29,2%. Ke ngoko siya kuba nokulahleka komgangatho olingana nale 29,2%.
8) Kumfanekiso ongaphambili sinokubona ukuba i-4.463 MB iza kuba njani kwi-DVD yokugqibela, kuphela yi-3.296 MB kuphela
Kwimovie. Olunye ulwazi luya kuhlala kwiifayile zomsindo kunye nemibhalo engezantsi engazukufumana uxinzelelo. Ngoku into ekufuneka siyenzile yile
Nqakraza kwiqosha «Eyogcino!» (elahliwe kwidiski enzima), emva koko isikrini esinje sikulo mfanekiso ulandelayo siya kuvulwa. Kuyo kufuneka sinikele ingqalelo
indawo ephawulwe njenge-2 ebizwa ngokuba "Khetha ifolda ekujoliswe kuyo kwifayile yemveliso yeDVD:" Oko kuthetha ukuba "Khetha indawo ekuya kuyo iifayile zeDVD."
Kulungile ke siya kucofa kutolo oluncinci ngasekunene kwaye ukhethe incwadi apho sifuna iDVD ilahlwe khona.
9) Siyaqhubeka nokujonga umfanekiso wangaphambili ngeli xesha kwindawo ephawulwe nge-3 ebizwa ngokuba "Khetha ithagethi yogcino"
Oko kuthetha ukuba ukhetha uhlobo lwefayile yokuvelisa. Njengoko sibona kulo mfanekiso ulandelayo, ngokunqakraza kwityolo lasekunene
Siza kuba neenketho ezimbini onokukhetha kuzo: Ifolda yeDisk eDisk okanye ifayile ye-ISO. Ukuba sikhethe iFold Disk Ifolda siza kwenza ifolda ngayo yonke ifayile
Iifayile zevidiyo zokurekhodwa kamva ngenkqubo efanelekileyo. Kodwa siza kwenza umfanekiso wediski kwaye ngenxa yoko siza kukhetha ifayile ye
Ukhetho lweFayile ye-ISO, ngale ndlela siza kwenza umfanekiso oza kugcinwa kwihard disk.
10) Gcina ukhumbula ukuba kwinqanaba 8, "Ifolda yeDisk eDisk" yaphuma ngokungagqibekanga kwaye kwindawo ephawulwe ngo-2 yavela
«Khetha ifolda ekujoliswe kuyo yefayile yeDVD:», ngoku xa ukhetha «Ifayile yemifanekiso ye-ISO» kwindawo ephawulwe nge-2 iya kuvela «Khetha ifayile yomfanekiso ojolise kuyo»
Oko kukuthi "Khetha indawo ekuya kuyo ifayile yomfanekiso" ke kufuneka sikhethe indawo apho sifuna ukuba sigcinwe khona. Xa sinayo
Nje ukuba indawo yomfanekiso ikhethwe, siya kucofa ku «Yamkela» kwaye umfanekiso uza kuqala ukwenziwa njengoko kubonisiwe kwiscreen esilandelayo.
11) Njengomgaqo jikelele, kwikhompyuter endala kakhulu, umfanekiso uya kwenziwa malunga nemizuzu engama-30 njengoko kunokubonwa kwifayile ye-
umfanekiso wangaphambili. Emva kweli xesha kwaye ukuba khange sibenangxaki, kuya kuvela esi sikrini silandelayo sokwazisa ukuba lo msebenzi unawo
Bkakuhle sele sikwazile ukucinezela umfanekiso we-DVD engqonge kabini kwaye senze umfanekiso kwifolda yethu
I-HDD. Ngoku konke esikushiyileyo kukurekhoda umfanekiso njengoko ubuqhele ukwenza. Mna ndisebenzisa uNero kwaye yeyona ndiyicebisayo.
ENdiyathemba ukuba le "Nyathelo ngenyathelo" iluncedo kuwe. Ndizokubona ngokukhawuleza!!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ungayitshisa njani imovie ngeDVD shwabanisa
Molo, ungachaza ukuba ubhalwa njani umfanekiso xa ukwihard disk kwaye yintoni oyisebenzisayo emnyama.
Hi JunRo, ukugcina umfanekiso xa sele unayo kwi-hard drive yeyona ndawo ilula kwinkqubo. Ndisebenzisa uNero ukurekhoda umfanekiso, konke okufuneka ukwenze kukugqiba ukuba luhlobo luni lomfanekiso: iso umfanekiso, umfanekiso we-nrg okanye umfanekiso we-cue, kwaye ukhethe xa urekhoda. Masibone ukuba ndingakwazi na kwaye phakathi evekini ndibeka inyathelo ngenyathelo lokufundisa ukuze ukwazi ukutshisa umfanekiso kwiDVD. Ukubulisa.
Molo Kiko, xa ucinezela ukunciphisa ubungakanani bemovie, ividiyo kuphela icinezelwe, iaudiyo ayixineki. Ndikuxelela oku ukuze wazi ukuba ukunyanzelwa kwakho kwehle ngezantsi kwe-70% kuya kufuneka ususe ezinye zeengoma zomsindo. Ngokwenza nje oku uya kubona utshintsho olubalulekileyo, uxinzelelo lunokutshintsha lube kwi-80% ngokususa umkhondo weaudiyo, ngakumbi ukuba umkhondo yiDolby DTS.
Kulo Ukucinezelwa okufanelekileyo kweDVDShrink Ndiyakwazi ukukuxelela kuphela ukuba ixabiso liphezulu ngokungcono, ungayi ngaphantsi kwe-70% kwaye ukusuka kwi-80% uya kuba nomgangatho ongaphezulu.
Kuya kubakho abantu abafuna ngakumbi abangasayi kufuna ukuya ngaphantsi kwe-90% kodwa kwincasa yam nge-80% sele unawo umgangatho wokulondoloza.
Hei iviniga kangangoko ndinokucinezela ngokuncipha, ndiyathetha ukuba yeyiphi ipesenti yoxinzelelo endinokuyisebenzisa kunye nenkqubo ukuze ndingalahli umgangatho. Kukho umda okhuselekileyo koku. Enkosi.
Molo! Uwufaka njani umfanekiso orekhodwe kwiCD? Ndikhuphele inkqubo eyayifana nomfanekiso wediski kwaye xa ndifuna ukuyivula, kuvela i-nero kwaye kuvela isilumkiso esibomvu. Enkosi
Hola rolando Masibone ukuba ungasibeka esiphi isaziso le nkqubo sikunika sona kwaye ndiza kubona ukuba ndingakunceda njani. Ukubulisa.
Hola Oscar impazamo ye "Ukuphinda ujikeleze" yimpazamo eqhelekileyo ngexesha lokurekhodwa. Inokwenzeka ngezinto ezimbini okanye ngenxa yokuba idiski ikrwitshiwe okanye ikwimeko embi okanye ngenxa yokuba umgangatho wediski umbi kakhulu, kwimeko yokuba ikopi.
Inye kuphela into onokuyenza kukuzama ukucoca i-disc kancinci okanye ubone ukuba enye irekhodi okanye umfundi onelaser engcono uyakwazi ukuyifunda. Ukubulisa.
Umbuzo owenzayo xa ufumana impazamo yokujikeleza ... ndicinga ukuba itsho njalo ...
enkosi .... Ndizamile ukuncipha kunye nokushenxisa kokubini kubonakala… andazi ukuba ndenzeni kwakhona… idiski yoqobo ingumaleko ophindwe kabini porsiaca.
Enkosi ngolwazi lwakho, Ingxaki yam yile ilandelayo.Bandiphathele ifilimu evela eSpain, ingingqi yesi-2 kwaye ndihlala e-USA, ingingqi 1. Ndingasusa njani ukhuseleko ndilutshintshe luye kwingingqi 1? ikopi kunye nenye enomgangatho woqobo. Emva kwexesha kunye noNero ndiza kuyitshintshela kwinkqubo yaseMelika.
Enkosi kwangaphambili ngoncedo lwakho
Licino, ukuba uthi ungayigqithisela kuNero kwi-NTSC, sebenzisa iDVDshrink njengoko kubonisiwe kwincwadana kwaye uyiguqule noNero, akunjalo?
Enkosi ngalo lonke olu lwazi, kulungile ndinayo i-movie emfanekisweni, kodwa ngokuzama ukuyivelisa kwakhona kwi-pc yam, ndingayivelisa kodwa ngeewindows media 10, kodwa iaudiyo ihambile, umbuzo wam ngulo, kuba ngumfanekiso ngqo kwidiski efihlakeleyo ifihla iaudiyo kwenye indawo kwaye andinakukwazi ukuyidlala? Ngaba kungenxa yokuba ndingasebenzisa kuphela imithombo yeendaba kwimithombo yeendaba kwaye andikwazi ukuvelisa kwakhona umfanekiso ngamandla e-dvd? okanye okokugqibela xa ndenza uvavanyo nge-Shrink dvd ndiza kuba nemboniso bhanyabhanya njengeyantlandlolo.
Enkosi ... Ndiyabulela kuwe, ndiphendule ngekopi ye-imeyile yam ukuba awunangxaki
Molo Wilson, jonga le bhlog, kwaye kuyinto eqhelekileyo ukuphendula izinto apha ukuze abo banamathandabuzo afanayo njengoko ubona ukuba inokuba yintoni ingxaki. Ke ndizokuphendula apha kwaye ndiyathemba ukuba awunangxaki.
Izizathu zokuba ungamameli iaudiyo zinokuba liqela, mhlawumbi xa uhambisa imuvi kwi-hard disk uyilibele i-audio okanye mhlawumbi ulahlekile kwi-codec ukuze ukwazi ukuyiva.
Eyona nto intle kukuba uyalwenza uvavanyo nge-Dvd shrink kwaye uya kundixelela. Ukubulisa.
Ndimtsha kule forum. Andiqondi okuninzi malunga neekhompyuter, kodwa ndiyayithanda.Ndinengxaki xa ndifuna ukutshisa imuvi nge-dvd-shrink 3.2. Ndifumana umyalezo wokuba kukho iingxaki ze-I / O. Ndingayisombulula njani loo nto. Enkosi lonke. Ungandinceda?
Molo Maite, jonga ezi ngxaki zihlala zenzeka xa imovie ofuna ukuyirekhoda ikrunekile okanye imdaka kancinci. Zama ukucoca umphezulu weDVD, kwaye ukuba ayiveli, chaza ingxaki yakho kancinci.
Indoda, emva kwenero, andinakudlala i-dvd nokuba ndinamandla e-dvd 7 nokuba yeyewindows okanye i-acer arcade
Mhlawumbi uyirekhode ngokukhawuleza okanye kwiDVD esemgangathweni.
Ndingathanda ukwazi ukuba ndingayikopa njani iDVD kwikhompyuter yam? kwaye ukwazi ukuyibona ngaphandle kokubeka i-cd. ndingayisebenzisa le nkqubo, i-dvd shrink? kodwa yeyiphi enye?
I-dvdshrink ilungile kule nto ufuna ukuyenza.
Enkosi ngalo lonke olu lwazi. Engaqhelekanga. Ijongeka ngathi ivela kwinkampani.
Ngoku imibuzo emibini.
1 Andinayo iDVD kwinkxaso yeplastiki, kodwa iDVD epheleleyo ikhutshiwe kwaye ikhutshelwe kwiwebhu kwi-hard disk yam. Ziigigs ezi-6 (hayi i-ISO, kodwa iifayile), ndingayidlulisela njani kwiDVD eqhelekileyo?
2 Xa ndibeka i-rw dvd ezimbini kwi-drive (ethi funda / ubhale i-dvd ezimbini) esikelelwe "cherry" (Windows XP) yi "cherry". Xa ndikhupha i-dvd yonke into iqhelekile
Enkosi ngoncedo lwakho
Molo u-Anton, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukulandela isifundo kodwa ukhethe ukhetho lweHard Disk Ifolda endaweni yeFayile yeFayile ye-ISO kwinqanaba 9. Ke unokuyicinezela kwi-DVD eqhelekileyo kwaye uyitshise.
Okwesibini akukho luvo, izinto ezivela eGuindos 😉 Ndiyabulisa
Isenokuba ngenxa yomgangatho weeDVD, ezinye ezinje ngePrinco zihlala zinika iingxaki ezoneleyo.
Molo mbulali weviniga !!!
Ndicinga ukuba ulwazi lwakho lukhulu, umbuzo:
Kwenzeke kum kabini, emva kokusebenzisa iDVD Shrink 3.2 (ukhetho lweHard Disk Ifolda) emva koko iDVD yoqobo ayisebenzi. nangona emva kwamaxesha amaninzi ndizama ukugqiba ukusebenza
Ndifuna ukurekhoda imovie ye-8 Gb kwidiski ye-4,5 gb kwaye ndingalahli umgangatho, nangakumbi ndifuna ukuba ihambelane nomdlali wasekhaya.
UJuanjo kwisifundo ucacisa ukuba ungayenza njani inyathelo ngenyathelo.
Ndiwushicilela njani umfanekiso ovela kwi-DVD yoqobo .. endiyenzileyo ndinciphisa iDVD… .kmo ndiyirekhode kwi-nero7?
Molo, emva kokuguqula imuvi erekhodwe ngekhamera yevidiyo iye kwi-iso, ndizama ukudlula eyesi-2 kwaye indinika impazamo yolwakhiwo lokuhamba, ungandinceda Imalunga nokwenza iikopi ezininzi zeDVD yekhamera yabazali abaliqela kuba imalunga nomdlalo bhanyabhanya apho abantwana bethu banxibe njengoPapanoel kule Krisimesi, Enkosi
@nicole kufuneka uvule kuphela kwaye ukhethe ukutshisa umfanekiso kwidiski.
@Antonio impazamo oyifumanayo kungenxa yokuba awenzanga sakhiwo seDVD sichanekileyo kwaye asizukufundwa kubadlali. Into ekufuneka uyenzile kukuguqula umxholo wekhamera yakho kwiDVD usebenzisa uNero okanye okufanayo.
Molo, ndingayidlulisa njani ividiyo ekhutshelweyo kwiYouTube iye kwiDVD, ndiyenzile ngokuyidlulisa njengedatha kwaye ayivelisi mfanekiso, enkosi
Luis kufuneka uqale uyiguqulele kwifomathi ebonakalayo ngeDVD yakho kwaye oku kuya kuxhomekeka kwinto enokufundwa yiDVD yakho kunye naleyo ingenakukwazi.
Molo, ndinengxaki andazi ukuba iqulathe ntoni, ndisebenzise i-dvd shrink ukunyanzela imovie, ndalandela amanyathelo njengakwisifundo kodwa xa ndifuna ukurekhoda kwi-nero indixelela ukuba ayisiyiyo ividiyo kwaye mhlawumbi andazi Yidlale, ndinemuvi kwi-hard drive yam kodwa andikwazi ukuyidlala kwi-dvd yamandla indixelela impazamo xx kwaye ayizukuyidlala kwaye ngesidlali semithombo yeendaba ndingavula kuphela ngeenxalenye, ndiyathemba ukuba ungandinceda, enkosi
UMariya mhlawumbi kwabakho ukuphazamiseka ngexesha lokulahla i-dvd. Kuya kufuneka uyiphinde le nkqubo.
Ngaba ucinga ukuba yile okanye i-dvd shrink okanye i-dvd yamandla okufaka ingxaki, emsebenzini wam ndenza inkqubo efanayo kwi-dvd shrink kwaye ukuba ibonwa nge-dvd yamandla, awucingi ukuba inokuba yenye into kwaye injani? Enkosi
Ndikhetha le bendikuxelele yona, nangayiphi na imeko unokuzama ukufaka yonke into kwakhona.
Molo, andikasombululi ingxaki yam, kodwa okwangoku ndizisa inkxalabo yenkqubo yokuxuba umculo, ungacebisa omnye, enkosi
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba ndingarekhoda njani iDVD yomculo, kodwa kuphela iingoma endizithandayo ngale nkqubo, enkosi
Molweni nonke, bendihlala ndirekhoda nge-dvdshrink, ndibeke imovie kunye neDVD engenanto kwaye khange ndibenangxaki. Ngoku okwenzekayo kum kukuba ndikhethe le ndiyirekhodileyo kwi-hard disk kwaye ndibeke iDVD engenanto kwaye xa ikwi-99% yokurekhoda indixelela ukuba andinakho ukurekhoda, kwaye iyayonakalisa iDVD. Ndifumana i-xp.5.1 aspi ... Omnye umntu unokundinceda, enkosi.
molweni bantu, mandinixelele ukuba ndirekhode imovie kwi-hard disk yam ukuya kwi-4.7 gb dvd. Xa ndibeka i-agrabar indixelela ukuba inokhuselo lwe-rce kwaye kufuneka ndikhethe indawo ...... xa ndikhetha indawo ye-4 yeArgentina xa ndiyirekhoda ndifumana umxholo ongezantsi ngesiSpanish nakwesinye isihlokwana esingaqhelekanga ngesiNgesi , Sele ndizamile ukurekhodisha amabini kwaye ndihlala ndifumana okufanayo… .Kwenzeka ntoni…?… .Ndichithe iiDVD ezi-2 kwaye andazi ukuba ndenzeni ... Ndiyathemba ukuba bayandinceda, enkosi… !!!
Ndilibele, ndisebenzise i-dvd shrink 3.2….
Molo, enkosi kakhulu kwisifundo, kodwa ndinombuzo,
Ndizamile ukwenza amanyathelo okuqala kodwa ndahlala kwa-4 kuba xa ndizama ukuyinika "i-disc evulekileyo" ayizukundivumela. Ndifumana iwindow yesilumkiso esithi: »i-dvd srink ifumene impazamo kwaye ayinakuqhubeka» «ayisebenzi dvd yokukhangela isakhiwo» am kwaye andazi kutheni! (haha) i-dvd iluhlu oluphindwe kabini kwaye ndifuna ukuyidlulisela kwenye kodwa ayingobungqingili obuphindwe kabini, yividiyo ...
Ndiyathemba ukuba ungandinceda okanye umntu othile angandikhokela hehe, kuba ayisiyonto yam le ... ^ ^;
I-Koby ingxaki kukuba i-dvd ozama ukuyitshisa, nangona isebenza kwabanye abadlali, ayinaso isakhiwo seDVD esichanekileyo, ngenxa yoko ayinakulahlwa ngeDVD Shrink.
Molo GANSTER, unjani? Nxibelelana nje emva kokuba le software ifunde idiski yam yoqobo, xa ndinokuyihlela, oko kukuthi, ndicime intshayelelo, izihlokwana ezingandithandiyo, njl.
Ngawaphi amanyathelo endinokuyihlela ngayo ifilimu.
IiHrobles ukukhetha iinxalenye zeDVD kufuneka ucofe ku-Re-umbhali kwaye ukhethe into oyifunayo.
Ndingathanda ukwazi ukuba iifilimu zirekhodwe kwisandi esingu-5.1 ngale nkqubo incinci
Ndijonge ndiyirekhodishe ubucwebe .. kodwa kwi-pc iyandifundela hayi kwi-dvd .. kuba inokuba iyile ..
Sele ndiyifumene impazamo .. enkosi = .. inkqubo ilunge kakhulu….
sthandwa!! Ndiyaluthanda ulwazi kwinkcazo… bendikade ndiyisebenzisa ukunciphisa i-dvd… umbuzo ngulo: ndiyihlela njani indawo? Ndiyifundile ukuba ikunye nombhali re .. ewe, kodwa apho ndasika imifanekiso endiyifunayo, emva koko ndibahlela njani kwikhompyuter? Ndifanele ukuguqula into kwifomathi?
ISantiago umbhali osetyenzisiweyo usetyenziselwa ukukhupha kuphela inxenye ye-dvd. Ukuba ufuna ukuhlela ungasebenzisa uMenzi weMovie oza ne-XP.
Xa i-Dvd Shrink itshise i-99% yediski, ihlala ilapho ngaphandle kokundinika nawuphi na umyalezo kwaye kufuneka ndibuyisele umatshini kwakhona kuba irekhoda ikhangelwe ngesantya esiphezulu kwaye ayiyivaleli idiski. Sele ndizamile ukwehlisa isantya sokurekhoda kwaye iyaqhubeka, ayisoloko ibangela ingxaki efanayo. Ndisebenzisa i-Verbatim -R discs. Nge-CD / iDVD yoMyili olula akukho nto yenzekayo okanye ngeNero 6 yeNkulumbuso, nokuba yeyiphi. NdinePC ekhawulezayo kakhulu. Olona phawu ndinokukunika lona kukuba le ngxaki iqale xa nditshintsha isishicileli, enye ibirekhoda ku-7X yayiyi-LG, le ngoku irekhodisha ngo-8X, yiSansung SH-S16B (WriteMaster). Ngaba ukhona umntu onesisombululo kule ngxaki? Ndithambekele kuba yinkqubo yeDVD Shrink 203 …… ..Uds? Ndiyabulela kakhulu ngqalelo yakho.
Molo, kuqala kwiinto zonke, ukuvuyela ibhlog yakho elungileyo kakhulu kwaye iluncedo.
Ewe ingxaki yam yile ilandelayo: xa usenza i-ISO cn dvd shrink iyigcina njengefayile .iso, kodwa nge-icon kunye nefomathi ye-rar, ndiyathetha, ndingayivula ndibone ngaphakathi kweefolda ezingaqhelekanga kakhulu, ke se , kwiifayile ze-ISO, ngoku xa uyitshisa kwiDVD nge-nero, ayisebenzi njengohlobo lwangaphambili kuba ayizukuvula.
Kulungile, ngethemba lokuba uneempendulo
Ndenze i-dvd eneefilimu ezintlanu ezine-dvd lab pro, oku kudlula phantse i-1 giga umthamo we-dvd 5, ndiyicinezele nge-dvd shrink. konke kulungile kude kube lapho. Kodwa okwangoku ukuyibeka kumdlali we-dvd owenziwe ekhaya iimovie zihamba gwenxa. njengayo yonke into engalunganga ngamaqhekeza
ndenza ntoni engalunganga
Molo, ndingathanda ukuba ucacise into malunga nesandi. Ndiwalandela onke amanyathelo kwaye uxinzelelo oluzenzekelayo lushiya ividiyo kwi-100%, ke, iaudiyo ayirekhodwa kwinto oyithethayo, akunjalo? Andazi ukuba kuya kufuneka ukhangele iibhokisi zomsindo ezingaphantsi kwepesenti yevidiyo okanye uzishiye zitshekishwe. Ndiyakwazi ukwenza onke amanyathelo kwaye xa nditshisa ifilimu kwiDVD ngokuncipha, akukho nto iviwayo. Kwaye xa ndiyicinezela kwaye ndiyigcina kwi-pc ukuyirekhoda nge-nero, kuba icinezelwe (ndiyabona isimboli yencwadi ebophelelweyo) ayindivumeli ukuba ndiyirekhode. Akayiqapheli. Ngaba kufuneka ichithwe? Konke okugqibelele. IVeronica.
Molo Vinegar, ndinombuzo kwaye ndifunda ibhlog yakho khange ndikwazi ukuyisombulula, yile ilandelayo, ungachaza ukuba ungayitshisa njani iDVD kwihard drive yePC kwaye uyidlale ukusuka apho ngeemenyu zayo zomsindo, iilwimi, ezongezelelweyo, izihlokwana njl? Ndisebenzisa ukuncipha. Enkosi kwangaphambili ngempendulo yakho, nangemibuliso, uCarlos.
Molo Carlos, kule ngxelo ingentla, ndithetha ngemifanekiso yediski, ukuba uyenza nge-dvd shrink kwaye uyifunde nge-drive eyiyo, uyayibona i-dvd. Kwiiveki ezimbalwa amanqaku achazayo aya kupapashwa.
Molweni iviniga .. Ndenza igalelo ngesisa, umbuzo .. umalunga nokubalisa kwi-dvd endikhuphele yona njengomfanekiso .. kodwa inobunzima obungu-7,24. Umbuzo uthi ingaba ndiwutshisa njani lo mfanekiso kwi-4 gb dvd? Uyakhumbula ukuba ikumfanekiso hayi kwifomathi ye-dvd ... enkosi kakhulu kwangaphambili!
Diego, kuya kufuneka ubeke umfanekiso kwidrive ebonakalayo ukuze usebenzise i-dvdshrink ngokungathi idiski ikwisidlali sakho se-dvd.
UZAMA NGE-DVD CLONE 2, AMI NDINIKE IZIPHUMO KWAYE INGQONDELELE ngakumbi
Molo Vinegar, xa ndisiya kwinqanaba le-10, xa ndicofa u-Kulungile, ndifumana olu lwazi lulandelayo: «iDvd Shrink ifumene impazamo kwaye ayinakuqhubeka. Ukukhusela ukukhuphela akuphumelelanga. Umsebenzi ongachanekanga ». Kwaye ke andivumeli ukuba ndiqhubeke. Ndisebenzise inkqubo yeDVD Decrypter kodwa ndisenengxaki yomthamo weDVD. Ndingenza ntoni?
Molo Martin, ukuba iDVD iza nokukhusela ikopi, andinakukunceda.
Khuphela i-dvd yekhonsathi ezisa ezinye izinto ezinje ngodliwanondlebe, njl ... kodwa xa ndifuna ukuvula ifolda apho ndinelungu ngalinye lealbham indixelela ukuba akukho nto ifunyenweyo ... yintoni enokuthi Ndiyavuma?
Iimuvi eziphantsi kwee-megavicion kwi-pc yam kwifomathi ye-avi nditshisa njani kwi-DVD?
kuba xa ndifuna ukukopa imovie yentsusa kule nkqubo, xa ndiyigqithisela kwifolda kwisiseko sam bhanyabhanya endiza kuyirekhoda, xa ndizama ukuyigqithisela kwi-nero, ibeka iifayile ngokulandelelana funa hayi kulowo kufuneka ahambe. Ungandithumelela isisombululo. ndiyacela
IMIMOSO MOUSE sitsho
UMOYA UYAWUTHATHA UMZEKELISO UTHATHA IXESHA ELININZI UKUWUQALA KUSENZA I-HRS EBINI. KUNYE NA OKU AKUPHELI Q AUG? NDIYABULELA KWANGOKO
Molo VINEGRE, NDINGAKWENZA NJANI UKUKOPISHA IDVD YASEKUQALENI Equkethe phantse i-8 MG KWI-DVD YOKUQHUBEKA NDAYE NDILANDELELA UKULANDELA AMANYATHELO OKWAMKELA KWINYATHELO LOKUGQIBELA LOKWENZA UMFANEKISO, KUTHATHA INDAWO ENDE NJENGOKUBA UQHUBEKA WAYEKA PHAMBILI
@MIMOSO MOUSE andazi ukuba inokuba yintoni ingxaki. Uxolo.
Uyibukela njani iividiyo zeYouTube
Uyitshisa njani idiski yedatha kunye noNero